45 သင့်စိတ်စွဲကိုသင်သိမ်းဆည်းထားပါရန်အသုံးပြုလိမ်လည် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ပို့စ် - 45 သင့်စိတ်စွဲကိုသင်သိမ်းဆည်းထားပါရန်အသုံးပြုလိမ်လည်
အတွေ့အကြုံအရငါတိုက်တွန်းချက်များသည်သင့်လျော်သောနည်းစနစ်များနှင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်အလွယ်တကူခုခံနိုင်သည်ကိုသင်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောလူသစ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ရုန်းကန်နေကြရသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှုရှိသည်။
စိတ်သည်သဘာဝ၊ porn, sex နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုတွန်းအားပေးရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဤအရာများအားလုံး၏အကြောင်းရင်းများကိုကျွန်ုပ်စတင်ကြားသိရသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာကြောင်းမကြာခဏတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ကျနော်တို့ဒီတစ်ခုအမှန်တရားသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်: အရမ္မက်ကျေနပ်မဟုတ်စင်ကြယ်သောနည်းလမ်းများဖြစ်လာသည်။ ကြောင်းတကယ်ပဲအတွက်နစ်မြုပ်ကြပါစို့။ အခြားတစ်စုံတစ်ရာသငျ့စိတျရုံသငျသညျပြန်သွားကြသည်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သင်ကပြောပြသည်။
မီးခိုးရောင်orရိယာသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ရှိသည်။ ငါသာငါစာရင်းပြုစုမယ့်တရားမျှတမှုကိုရောက်ရှိရန်လိုအပ်စွဲခဲ့ဖူးတယ်, သင်ကသူတို့ကိုသူတို့အလွဲသုံးစားမှုခဲ့သည့်အရာပေးခြင်းအားဖြင့်တစ် ဦး စွဲပျောက်ကင်းအောင်မလုပ်နိုင်ပါ။
ဒီ“ ဆင်ခြင်ခြင်း” ကငါတို့စိတ်ကိုပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အခါသန့်ရှင်းနေဖို့ခက်ခဲတယ်။ တာဝန်မဲ့သောလိင်ကိုအားပေးသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်နေထိုင်ခြင်းကပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ "ယုတ္တိဗေဒ" ကိုအမှန်တရားနှင့်တိုက်လှန်ရပါမယ်။ သတိရ, ဒါကတစ် ဦး အလိုတော်င်မယ့်လျှင်မဟုတ်ပါဘူး။
မသိဘဲစွဲစွဲလမ်းလမ်းကျင့်ကြံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် porn ၏နောက်ကွယ်ရှိအချက်အလက်များနှင့်သင်၏စိတ်ကိုအသုံးပြုသည့်လှည့်ကွက်များကိုမသိလျှင်နောက်ဆုံးတွင်စွဲလမ်းမှုအားသေချာစေမည့်မမှန်မကန်ကောက်ချက်ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
စိတ်စွဲမှတ်ထားပါ: ဤတရားမျှတမှုအားလုံးကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရပြီး၎င်းတို့သည်သင်အားပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်ကြိုးစားရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သို့သော်အချိန်တန်သော်သင်သည်သူတို့ကိုလိမ်လည်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသောအခါ၎င်းတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်ထိန်းချုပ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသောတွန်းအားတစ်ခုသာကျန်တော့သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိတ်ဖိစီးသောအချိန်ကိုမခံစားရမီကြာမြင့်စွာမကြာပါ။ ဒီအချိန်တွေမှာငါတို့ရဲ့အစောင့်ကအားနည်းနေတယ်။ ငါတို့ကထပ်ခါထပ်ခါလက်ခံချင်တဲ့သဘောနဲ့ပြန်ခေါ်ရမယ့်အကြောင်းရင်းကိုဖန်တီးဖို့ပိုပြီးလိုလိုလားလားရှိတယ်။
3) ဤအမှုအရာကိုချွတ်, ငါ၏စိတ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်
၁၄) ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ ဒါကငါ့ကိုစိတ်ငြိမ်သက်စေပါလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့်အဆင်ပြေသူဖြစ်ရမည်ဒါ 16) အခြားသူများလုပ်
၁၇။ ငါပြtheနာပါ၊ ငါလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး
20) ဤငါလိုချင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်
၂၃) ငါ pornstars အစားအပျော်တမ်းပစ္စည်းတွေကြည့်တာကောင်းတယ်
၂၅) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်စရာမလိုပါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည် (အပြန်အလှန်)
၂၇) ငါ့ကိုပါ ၀ င်ပတ်သက်ရင်ဘယ်သူမှစိတ်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး
28) နေသမျှကာလပတ်လုံးမည်သူမျှမခံစားပေမယ့်ငါ့ကိုအတိုင်း, ငါကကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်
၃၂) ငါနုတ်ထွက်ဖို့ရည်းစား / ကောင်မလေးရသည်အထိစောင့်လိမ့်မည်
၃၃) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်၏ရည်းစား / ရည်းစားနှင့်ပြုလျှင်၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်
အဘယ်ကြောင့်ငါသင့် 34) အခြားမည်သူမျှဒါဂရုစိုကျ?
၃၈) တချို့လူတွေမှာပြproblemsနာတွေရှိပေမယ့်လိင်၊ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့မဆိုင်ဘူး
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်တာဝန်မရှိပါ။ သဘောတူခွင့်ပြုသရွေ့ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်၊ မည်သို့မည်ပုံကျွန်ုပ်ထင်သလဲ
ကလူ sluts တူသောပြုမူနေလျှင် 40), ကျနော်တို့ sluts ကဲ့သို့သူတို့ကိုငါဆကျဆံသငျ့
41) Porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့ tools တွေကိုအဓိပ်ပာနေကြ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့လိုလားပါလျှင် 42), ငါတို့သည်သူတို့ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်
43) ကတိုက်တွန်းအမြဲရှိလိမ့်မည်, ဒီတော့ငါပဲစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သုံးသင့်တယ်
44) ငါညစ်ပတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချင်လျှင်, အဘယ်သူသည်ဂရုစိုကျ?
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုလှည့်စားပြီးသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုခြင်းသည်သဘာဝဖြစ်သည်
ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဒါတွေအားလုံးကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါပဲငါစာရင်းပြုစုထားတာထက်ပိုပြီးရှိတယ်၊ သူတို့ထဲကအနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်မှငါ့ကိုမကူညီနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကမထင်ထားဘူး၊ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကကျွန်မကိုထပ်မံမလုပ်မိအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သင်၏စိတ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သင်က“ သင်လိုအပ်သည့်အရာ” ကိုငြင်းပယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမုသားများထဲမှတစ်ခုကိုပင်လိုက်နာပါ။
လိင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်များသည်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်သတင်းမှားများဖြင့်များစွာပုံသွင်းထားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၊ အချက်အလက်များကိုမသိသူများထံမှကြီးပြင်းလာခြင်း၊ မီဒီယာမှဥပမာများ (မီဒီယာများအရဆိုလျှင်ဝတ္ထုများ၊ ရုပ်ရှင်၊ ကျနော်တို့စိတ်ကူးယဉ်ကနေအဖြစ်မှန်အပေါ်သင်ခန်းစာများကိုယူ။ အဘယ်မှာရှိငါတို့ကြည့်ဘယ်မှာကြည့်ရှုကြ၏။
စင်ကြယ်သောရယူခြင်းဤသုံးပါးသောအရာတို့ကိုရန်လိုအပ်သည်: လိင်စွဲလမ်းနှင့် porn နှင့် ပတ်သက်. အမှန်တရားအသိအမှတ်ပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ conditional စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်လိင်လွတ်လပ်သောဖြစ်လာ။
တချို့ကငါတတိယအကြောင်းငါဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမေးလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လိင်ဆက်ဆံရန်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမလိုအပ်ဘဲဘဝတစ်ခုလုံးလျှောက်လှမ်းနိုင်သည်။ ဒါဟာဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ဆိုလိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်ဟာတစ်ယောက်တည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပေမယ့်မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအထူးတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်မဆုံမိလျှင်၊ (ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်သိရပါမယ်။ လူနှစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကြိုက်နှစ်သက်သလိုမရိုးရှင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါကအခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုအတွက်) ဆိုလိုတာကလူတွေဟာလူတွေဖြစ်တာကိုသိပြီး၊ မည်သည့်အခြေအနေမဆို
အကယ်၍ ဤအရာသည်နားလည်မှုလွဲမှားလျှင်၊ သင်သည်ဘယ်သောအခါမျှလိင်မဆက်ဆံသင့်ဟုငါမပြော။
ဒါကြောင့်ပါပဲ။ bs မရှိပါ။ ငါပြခဲ့တဲ့အရာတွေကိုယူပြီးမင်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာမင်းကိုကူညီဖို့သုံးပါ။
၄၅ လွတ်မြောက်မှုသို့အမှန်တရား (CrypticVoice ၏တုံ့ပြန်မှု“ သင့်ကိုစွဲစွဲလမ်းနေစေဖို့သင့်ကိုလိမ်ပြောတာ ၄၅”)
ဤသည် CrypticVoice ၏“ မင်းကိုစွဲလမ်းစေဖို့သင့်ကိုလိမ်ထားသည်မှာ ၄၅” ၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
ငါသူတို့ကိုသင်ချေပနိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုသာတင်ချင်တယ်။ ပုံစံကတော့နံပါတ်ကလိမ်တယ်၊ စာကအမှန်တရားနဲ့သွားတယ်။ ငါအဓိကအားဖြင့် CrypticVoice ကိုရိုသေလေးစားခြင်းဖြင့်လုပ်နေတာပါ။ ပြီးတော့ porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်မယုံကြည်တဲ့မုသားအားလုံးကိုချေမှုန်းတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုရဖို့ပါ။ အများစုမှာဒီမှာဖြစ်ကြသည်။
DISTRESS - ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်စိတ်ပျက်အားငယ်ဖွယ်ကောင်းသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိတ်ဖိစီးသောအချိန်ကိုမခံစားရမီကြာမြင့်စွာမကြာပါ။ ဒီအချိန်တွေမှာငါတို့ရဲ့အစောင့်ကအားနည်းနေတယ်။ ငါတို့ကထပ်ခါထပ်ခါလက်ခံချင်တဲ့သဘောနဲ့ပြန်ခေါ်ရမယ့်အကြောင်းရင်းကိုဖန်တီးဖို့ပိုပြီးလိုလိုလားလားရှိတယ်။
၁။ အမြဲတမ်းအထီးကျန်နေမှာပါ။ အနာဂတ်ကိုဘယ်သူသိလဲ
၂) အခုငါစွဲနေပြီ၊ ဆက်ဆံရေး pussies အဘို့ဖြစ်ကြ၏! ဟားဟေ့၊ စွဲနေတုန်းမှာသင့်မှာစစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမရနိုင်ဘူး၊
၃။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်ရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ တစ်မိနစ်လောက်တော့ပိုဆိုးသွားမှာပါ။
၄။ ကျွန်ုပ်ခံစားကောင်းခံစားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ က။ သင်ဘာမျှမခံစားရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နာကျင်မှုဝေဒနာကိုသင်ခံစားရသည်နှင့်သင်သာလျှင်သာယာချမ်းမြေ့သာယာပါလိမ့်မည်။
၅) နာကျင်မှုဝေဒနာပျောက်ကင်းစေရုံသာမက…။ ဤအရာသည်၎င်းကိုထုံသွားစေပြီးနောက်တစ်ကြိမ်နောင်တရခြင်းကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
၆။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်။ PMO သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပြီး ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးသည်။ အချိန်တိုင်းဖြစ်ပျက်
၇။ ၎င်းသည်တိုက်တွန်းမှုကိုရပ်တန့်စေလိမ့်မည်။ သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ပါလိမ့်မယ်။
၈။ အသက်မဲ့မှုကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ က။ ဘဝသည်၎င်းနှင့်အတူဖြစ်စေ၊ မရှိဖြစ်စေဖြစ်လိမ့်မည်။
9) ငါစတင်ခဲ့ပြီး, ငါမစွန့်ခွာနိုင် ... က။ သင်လုပ်ချင်တာကိုအခုလုပ်နိုင်ပါတယ်
၁၀။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်မစွမ်းနိုင်ဘူး။ က။ သင်၏လက်ကိုသင်၏ဘောင်းဘီ၊ မျက်လုံးညစ်ညမ်းသောမျက်လုံးများနှင့်အခြားနေရာများတွင်သိမ်းပိုက်ထားပါကခွန်အားမလိုအပ်ပါ။ မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။
၁၁။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုရှက်လွန်းနေပါသည်။ က။ အိုကေ။ ဒါကြောင့်မင်းကိုရှက်စရာဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမလုပ်ပါနဲ့
၁၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်အမှန်ပင်မကူညီနိုင်ပါ။ သင်မှန်ရာကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်သဘာဝကျလာလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရမ်းပျံ့နှံ့နေတယ်။ အာဏာရှင်တွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းလည်းလုပ်နိုင်မှာပါ။
၁၃။ ကျွန်ုပ်ပြုသောအမှုကြောင့်လောကသည်ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ “ လောက” မရှိပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြံဥာဏ်များကပြtheနာဖြစ်သည်။
၁၄) ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ ဒီငါ့ကို ... ငြိမ်ဝပ်လိမ့်မည် onanism ပြီးနောက်သင်၏ဒေါသသည် ပို၍ ဆိုးလာလိမ့်မည်။
“ ဒီအချက်ကိုကျိုးကြောင်းညီညွတ်အောင်လုပ်ပါ။ သဘာဝကကျန်းမာတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး
၁၆။ အခြားသူများကလုပ်ကြသည်၊ သို့မှသာအဆင်ပြေရမည်။ က။ အခြားသူများကမူဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရောဂါကူးစက်ခြင်းနှင့်ရန်ကီးကဲ့သို့သောသူများဖြစ်ကြသည်။
၁၇။ ကျွန်ုပ်ပြtheနာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါ။ သငျသညျအမှန်ပင်သင်၏စွဲဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်သင်လည်းအများကြီးပိုဖြစ်ကြသည်။
၁၈။ သယ်ဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ က။ သငျသညျထိုသို့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ထိန်းချုပ်မှုထဲကပြီးသားပါပဲ။
၁၉။ ကျွန်တော်မထွက်မချင်းကျွန်ုပ်ဒါကိုလျော့နည်းအောင်လုပ်ပါမယ်။ က။ ချစ်သူ ရပ်လိုက်ရုံပဲ
၂၀) ဒါကငါလိုချင်တာပါ၊ ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်။ က။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဘ ၀ နှင့်စိတ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသို့မဟုတ်သင်လုပ်လိုပါသလား။
၂၁) ခုခံခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ပါ။ ၎င်းကိုခုခံခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောကျန်းမာသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၂၂) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမာခံပစ္စည်းများကိုမကြည့်ပါကအဆင်ပြေပါသည်။ က။ သင်ဇုန်၌ရှိနေစဉ်သင်နှိပ်လိုက်သည့်အရာကိုမရွေးချယ်ပါ။
၂၃) ငါ pornstars အစားအပျော်တမ်းပစ္စည်းပစ္စယများကိုကြည့်လျှင်ကောင်းပါတယ်။a။ နှစ် ဦး စလုံး porn ဖြစ်ကြသည်။
၂၄) လူများသည်မမှန်ပါကအဆင်ပြေပါသည်။ က။ သင်လည်းဂူပန်းချီကားများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်မလား။
၂၅) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်စရာမလိုပါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂတတ်နိုင် (နှင့်အပြန်အလှန်) ...a။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးအချင်းချင်းအားဖြည့်။ နှစ်ခုလုံးကိုရပ်ပါ
၂၆) ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးမထားပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည်။ က။ ငါဝါးတာကိုမမျိုလျှင်စားလို့လည်းရတယ်။
၂၇) ကျွန်ုပ်ပါ ၀ င်ပါကမည်သူမျှစိတ်ထိခိုက်စရာမရှိပါ။a။ သင်လူသိရှင်ကြားထွက်သွားသည့်အချိန်တွင်သင်သည်တူညီသောလူဖြစ်ပြီးသင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ်သင်၌ဆင်းရဲသောခင်ပွန်း၊ သူငယ်ချင်းနှင့်ဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
၂၈) ငါမှတပါးအခြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုမျှငါမခံရ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရကြပြီ။ ဘဝမှာမင်းအားကိုးခဲ့တဲ့သူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်လိုအပ်တဲ့အခါအကူအညီပေးခဲ့တယ်။ မင်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားရင်ကော။
၂၉) ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ က။ မင်းသိတယ်
၃၀) ငါအသက်ကြီးလာပြီးအားကြီးလာတဲ့အခါငါနုတ်ထွက်နိုင်တယ်။ က။ သင်အဲဒီလောက်ကြာလိမ့်မယ်မသိဘူး
၃၁) အချို့သောလူများအားကုသနိုင်ခြင်း (သို့) စွမ်းအားမရှိခြင်း။ တချို့လူတွေကဆိုးဆိုးဝါးဝါးမလွတ်လပ်ချင်ကြဘူး။
၃၂) ကျွန်ုပ်ထွက်ရန်ရည်းစား / ကောင်မလေးရသည်အထိစောင့်ရမည်။ သင်အလိုရှိသည့် bf / gf ကိုသင်ပေါ်မှာရှိနေစဉ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
၃၃) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်၏ရည်းစား / ရည်းစားနှင့်ပြုလျှင်၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ က။ အမှတ်သင်သည်ထိုအရာကိုပင်ဖျက်ဆီးပစ်သည်။
၃၄) ဘယ်သူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ဘူး။ …က။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂရုစိုက်! NoFap မှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘာကြောင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အားပေးနေတာလဲ။
၃၅) ဒီဟာကငါဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုငါလက်ခံသင့်တယ်။ က။ မင်းဘယ်သူလဲအမြဲပြောင်းလဲနေတယ်။
၃၆) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဘာမှမမှားပါ။ က။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဘယ်ကြောင့် အပြစ်ရှိ၍ ရှက်ကြောက်ရသနည်း။ ဘာကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တာလဲ ပြီးတော့သင်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရုံသာမကဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းသည်။
37) ငါလိင်အတွက်နယ်နိမိတ်မလိုအပ်ပါဘူး။ က။ ပြီးရင်သူတို့ကို block cell C. မှာတွေ့လိမ့်မယ်။
၃၈) လူအချို့ကပြproblemsနာတွေရှိပေမယ့်လိင်၊ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့မပတ်သက်ဘူး။a။ ထိုပြproblemsနာတစ်ခုမှာငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်တာဝန်မရှိပါ။ သဘောတူခွင့်ပြုသရွေ့ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်လုပ်အရေးမကြီးပါ။ မိမိတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆုံးရှုံးရန်သဘောတူကြသောလူသားများသည်သူတို့၏ကျဆင်းမှုကိုလက်ခံခြင်း၊
40) အကယ်၍ လူတွေက sluts လိုပြုမူတယ်ဆိုရင်သူတို့ကို sluts လိုဆက်ဆံသင့်တယ်။ က။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏စွဲခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားသနည်း။ မင်းကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အပြုအမူအတွက် sluts တွေလိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်လူတွေကမင်းကိုမင်းလိုကောင်တွေလိုဆက်ဆံသင့်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါ။ လူများသည်ထိုထက် ပို၍ သနားကြင်နာတတ်ကြသည်။
41) ကျား / မ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်သည်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ က။ သင်၏လိင်တံသည် - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ပါ - အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးကောင်းစွာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းပါ။
၄၂) အကယ်၍ လူတ ဦး ကိုလိင် (သို့) ညစ်ညမ်းမှုအတွက်အသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိပါက၊ က။ သင်သူတို့ကိုသနားကြင်နာပြီးထိုထက်ကောင်းသောဘ ၀ အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိကြောင်းပြသသင့်သည်။
၄၃) တိုက်တွန်းမှုသည်အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အရှုံးနှင့်ဆက်လက်သုံးစွဲသင့်သည်။ သငျသညျကနေထွက်ပြေးလာသောအခါတိုက်တွန်းသေသွားတယ်။
၄၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ပတ်လိုပါကမည်သူဂရုစိုက်မည်နည်း။ …က။ ငါလုပ်တယ်
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုလှည့်စားပြီးသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည်မှာသဘာဝဖြစ်သည်။ က။ သဘာဝကလူ့မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားဖြစ်ဖို့ဆိုတာချစ်ခြင်းပဲ။ လိင်၌နေရာရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ - အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည် - ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်များစွာပိုသည်။